प्रदेश एफएम नेटवर्कको संचार मन्त्रीद्वारा उद्घाटन, ६ नं. प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग हुने विश्वास – Enayanepal.com
प्रदेश एफएम नेटवर्कको संचार मन्त्रीद्वारा उद्घाटन, ६ नं. प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग हुने विश्वास
सुर्खेत, असोज ११ । यहाँको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा आएको प्रदेश एफएम नेटवर्कको सोमबार औपचारिक रुपमा उद्घाटन भएको छ । नेटवर्कको सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् ।
एफएमको उद्घाटनसंगै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले प्रदेश नं. ६ को समृद्धिका लागि एफएमको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश नंम्बर ६ को सम्बृद्धिका लागि प्रदेश एफएम नेटवर्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने अन्य सहभागीहरुले पनि जोड दिएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायधिश तेजबहादुर केसीले प्रेस र पत्रकारिताका कुरा संवेदनशिल भएकाले समाजप्रति जिम्मेवार तथा उत्तरदायी भएर लाग्नु पर्ने बताए । आर्थिक रुपमा पछाडी परेको प्रदेश नं. ६ लाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने दिशामा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
आर्थिक बिकास र नेतृत्व बिकासमा दख्खल भएका व्यक्तिहरुको सफलताको कथा रेडियो मार्फत प्रसारण गर्दा पडाडी परेका वर्गलाई प्रेरणा मिल्ने न्यायाधिश केसीको भनाई छ । उनले समाजमा पछाडी पारिएका वर्गलाई राज्यको पहँुचमा पु¥याउने गरी समाचारलाई प्रदेश एफ एम नेटवर्कले प्राथमिकता दिन सक्नु पर्नेमा जोड दिदै सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधिश कैलाशप्रसाद सुवेदिले रेडियोले सधै सत्य तथ्य र निष्पक्ष रुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा रेडियो संचालक समितीका अध्यक्ष सचिन रोकाले प्रदेश एफएम नेटवर्कलार्ई साझा र स्वतन्त्र रेडियोका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
यस्तै उनले समावेशिताको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेे, सबै राजनीतिक दलका समाचारहरु समानरुपमा संम्प्रेषण, महिला अधिकारको पक्ष तथा सार्वजनिक कार्यक्रमका सुचना निशुल्क प्रसारण गरीने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । अध्यक्ष रोकाले सम्पादकीय स्वतन्त्रता पनि व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वनय गरिनेमा विस्वस्त रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तै शुभकामना मन्तव्यका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले गलत सूचनालाई सही भनेर प्रसारण नगर्न आग्रह गर्दै शुभकामना व्यक्त गरे ।
नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष धुब्रकूमार शाहीले संचारमाध्यामले प्रदेश नंम्बर ६ को सम्बृद्धिको अभियानलाई साथ दिनु पर्ने जोड दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य ठम्मर बिष्टले समाज रुपान्तरणमा प्रदेश एफ एम नेटवर्कले क्रान्तिको ढोका खोल्नुपर्ने भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।
यस्तै नेपाली काग्रेसका भिमबहादुर शाही (परियार) ले रेडियोको सफलताको शुभकामना दिदै प्रदेश नंम्बर ६ को आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष सुर्य थापा (बिक्रम) ले अहिलेको युगमा राजनीतिक क्रान्ति सकिन थालेको भन्दै आर्थिक सम्बृद्धिको क्रान्तिमा रेडियोले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सुर्खेत उद्योग वाणिज्यसंघका वाणिज्य उपाध्यक्ष वासुदेब शर्माले प्रदेश एफ एमले निष्पक्षरुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नेमा आफू विस्वस्त रहेको धारणा राखे ।
प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य लक्ष्मी पुनले महिला अधिकार र समाबेशिताको पक्षमा रेडियोले आवाज बुलन्द गर्न सुझाव दिइन । कार्यक्रममा प्रेस यूनियन सुर्खेतका सचिव गणेश कार्कीले पत्रकारिता गर्नेहरु रात दिन नभनी काममा खटिएको भन्दै सोही अनुसार प्रदेश एफएमले न्युनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए ।
प्रेस चौतारी नेपाल सुर्खेतका अध्यक्ष सुर्यप्रकाश कडेल, क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयका प्रमुख लोकबहादुर सुनार, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख हेमराज बिष्ट, बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,संचारकर्मि लगायतको सहभागिता रहेको छ ।
तस्बीर : प्रदेश एफएम नेटवर्कको स्टुडियोमा सञ्चारमन्त्री लगायत एफएम सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरु ।